Kutenga Yakapetwa Yemagetsi Wiricheya | Karman® Tranzit GO
musha / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya yemagetsi
Achiratidza zvose 9 zvawanikwa
Chero Chigaro Saizi14 "Chigaro16 "Chigaro18 "Chigaro
Chero Chigadzirwa Kurema19.1 makirogiramu - 25 lbs35.1 lbs kana zvimwe50 lbs kana zvimwe
Chero Rudzi rweLegrestwakasimbaKufamba KureInobviswaPeta-Up
Chero Armrest RudziwakasimbaFlip Kudzoka
Iyo Tranzit Go inotungamira edu einjiniya Wiricheya
Tine zvigaro zvemawiricheya uye mawiricheya emagetsi akapetwa. Tenga mhando dzakasiyana dzinokodzera iwe. A wheelchair yemagetsi mudziyo wekufambisa unofambiswa nebhatiri inobvumira mushandisi kushandisa joystick kusimudzira chigaro chakatenderedza. Paunenge uchitsvaga wiricheya ine mota inotengeswa, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti ndeupi rudzi rweiyo poindi yemitengo uye maficha aunoda kuti uite hupenyu hwako huve nyore. Wiricheya yemota yakajairika kazhinji ine furemu inorema, izvo zvinoita kuti zvikuomere kuti uchengete nekutakura uchitenderera. Nekuda kweizvi, takave nechokwadi chekugadzira magaro edu emota kuti ave akareruka sezvinobvira. Izvi zvinoreva kuti cheya ine zviyero zvakafanana nezvimwe zvigaro zvemagetsi zvine bhenefiti yakawedzerwa yekukwanisa kuipeta nekuichengeta zviri nyore nekuda kwechiedza chayo chakareruka.
Mawiricheya emagetsi anowanzo fananidzwa ne "mobility scooter", imhaka yekuti anouya akaenzana aine akawanda akafanana maficha. Nesikuta yemagetsi iwe unokwanisa kufambisa chishandiso uchishandisa mabhaudhi, akafanana nebhasikoro. Iko kune muganho kune yakawanda sei uye nekukurumidza sei kwaunokwanisa kufambisa sikuta kana iwe uri munzvimbo dzakamanikana. Nekuti iro rakafanana nemabhasikoro anobata, kana ukazviwana uri mumba munzvimbo diki saka unogona kuona kuti zvinonetsa kudzora sikuta.
Apa ndipo apo wiricheya yemagetsi kana yemagetsi inouya ichibatsira. Nekuti iwe unokwanisa kudzora chishandiso ne joystick, iwe une kwakawanda kutonga pamusoro pekuti iwe unofambisa sei chigaro munzvimbo dzakamanikana. Izvi zvinoshanda nekuti unokwanisa kutora nzira dzakasiyana kuenda kunzvimbo dzakamanikana, uchishandisa makona akasiyana kuti ufambe kupfuura mukoridho kana musuwo uye zvimwe zvinhu zvingapinda munzira yako. Iko zvakare kune kushoma kwekuyedza kufambisa chigaro nekuti urikungoshandisa minwe yako kudzora chishandiso, kusiyana nemagetsi sikuta. Kune zvekare kumwe kufambira mberi kwetekinoroji kana zvasvika pakushanda cheya ine mota. Pane basa ririkuitwa nhasi kubvumira vashandisi kudzora zviri nyore chishandiso nekushandisa muromo kuti ufambe nerurimi rwako, uye nedzimwe mhando dzemberi dzekutungamira.
Kune toni yemacheya akasiyana ayo anofambiswa nebhatiri pamusika, uye dzimwe nguva zvinogona kuve zvakaoma kusarudza kuti ndeipi inokodzera mararamiro ako. Chinhu chikuru chekurangarira ndechekuti uchange uchichiishandisa sei (kureva mukati / kunze) uye ndeapi maficha anodikanwa kuti iwe uve wakasununguka kuishandisa. Iwo magetsi emagetsi machair atinopa anoitwa kuti ave nyore kushandisa uye anotakurika zvakanyanya.
Anti Bacterial Makushoni
Kutenga kweiyo Simba yakamira kana Magetsi Kupeta Wiricheya
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawicheya emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo yakareruka kupfuura yakasununguka wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako: